မြင့်မားသောနည်းပညာသတ္တု detector (MS-9020C) China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:Minelab Gpx 4500 သတ္တု Detector,Garrett GTI 2500 သတ္တု Detector,အမြင့် Range သတ္တု Detector
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြေအောက်သတ္တု Detector > ရွှေသတ္တု Detector > မြင့်မားသောနည်းပညာသတ္တု detector (MS-9020C)
မြင့်မားသောနည်းပညာသတ္တု detector (MS-9020C)
MD-9020C ဝါသနာအဆင့်မြှင့်သတ္တု detectors
MD-9020C LCD ကိုမြေအောက်သတ္တု Detector တစ်မူပိုင် LCD display ကိုနည်းပညာပိုင်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာတိကျပစ်မှတ်လုပျနိုငျတဲ့ item ကိုဖျောထုနှင့် mode ကိုဖော်ထုတ်မယ်ညှိ။ ဒါဟာလူများအတွက်စုံလင်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများဘဏ္ဍာကိုမုဆိုးဝါသနာအဆင့်မြှင့်ထားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်သတ္တု detector .. ၎င်း၏ LCD display ကိုညအချိန်တွင်သတ္တု detect လုပ်ဖို့အသုံးပြုသူကိုကူညီနိုငျပြင်ပတွင်စွန့်စားမှု, relique ထောက်လှမ်းစသည်တို့လုပ်ဖို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဒီအစွမ်းထက်နှင့်စွယ်စုံစက်ကိရိယာနှင့်, သင်ရုံဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့် ပတ်သက်. ဒင်္ဂါးပြား, ရှေးဟောင်းပစ္စည်း, လက်ဝတ်ရတနာ, ရွှေ, ငွေအဘို့လိုက်ရှာနိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရယူရန်, detector စွယ်စုံနဲ့ LCD နှင့်အတူသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ မြေအောက် detector စက်, minelab gpx 4500 သတ္တု detector, မြေအောက်သတ္တု Detector, မြေအောက်သတ္တု detector စကင်နာ, နက်ရှိုင်းသောမြေအောက်သတ္တု detector ။
1. ပါဝါ:6x ကို 1.5V AA ကို garrett GTI 2500 သတ္တု detector
2. ကြိမ်နှုန်း: 7.5 kHz တိကျရွှေကို detector
3. လက်ရှိ: ကို standby: 40mA
မက်စ်: 110mA, မြေအောက်ရွှေ Detector ။
4. ဗို့အား: 7.2-9.6V minelab သတ္တု detectors အ
5. Operating အပူချိန်: -20 ° 60 ကို C + သို့ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
6. အာရုံ: အမေရိကန် 50 Cent က: 200mm
7. ပေးဖျောပွ Mode ကို: LCD ကို Mode ကို
အသံ Mode ကို
8. Stretch အလျား: 23-31 လက်မ
9. Detector အချင်း: 8.3 လက်မ
10. အရောင်: အဝါရောင် / Black ကမြင့်မားတဲ့နည်းပညာသတ္တု detector
11. အလေးချိန်: 1.1kg
12. Size: 13.6 (W) × 21.3 (L) 5.9 (H) လက်မ×
13. အထုပ်အလေးချိန်: 1.9kg
14. အထုပ်အရွယ်အစား: 22 (L) 6.7 (H) လက်မ× 14.2 (W) ×။
မြင့်မားသောအကွာအဝေးသတ္တု detector, နက်ရှိုင်းရှာဖွေရေးမြေအောက်ကိုရွှေ detector, မြေအောက်ကိုရွှေ detector ။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : မြေအောက်သတ္တု Detector > ရွှေသတ္တု Detector
MD-9020C မြေအောက်ကိုရွှေ Finder စက်ကိုရွှေ detector အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရွှေ detector စက် (MD-9020C) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကျေးဇူးမုဆိုးသတ္တု detector (MD-9020C) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြေပြင်ထိုးဖောက်ရေဒါသတ္တု detector (MS-9020C) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကိုရွှေ detect ကြောင်းသတ္တု detectors အ (MS-9020C) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြေအောက်ကိုရွှေသတ္တု detector (MS-9020C) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြေအောက်နက်ရှိုင်းရှာဖွေရေးကိုရွှေသတ္တု detector (MS-9020C) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လက်ကျင်းပသတ္တု detector ဘဏ္ဍာကိုအမဲလိုက် (MS-9020C) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Minelab Gpx 4500 သတ္တု Detector Garrett GTI 2500 သတ္တု Detector အမြင့် Range သတ္တု Detector Minelab သတ္တု detectors Minelab Safari ကသတ္တု Detector Micronta သတ္တု Detector Ebinger သတ္တု Detector tm 808 သတ္တု Detector